"လုံခြုံနွေးထွေးတဲ့ မွေးစားသူတွေဆီ ရင်သွေးငယ်တွေကို ထည့်ပေးခွင့်ရတဲ့အခါ ပိုပြီး ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရတယ်" ဆိုတဲ့ မြင့်မိုရ်မေတ္တာ (ခိုနားရာ)ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာသန့်နဲ့ခဏတာ - For her Myanmar
ရင်ခွင်မဲ့ ကလေးရယ်လို့ ဂေဟာမှာ အပ်နှံပြီးတဲ့နောက် သူတို့လေးတွေ အနာဂတ်ဟာ ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှာလဲ?
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိဘမဲ့ကလေးလို့ သတ်မှတ်ထားခံရတဲ့ ရင်သွေးငယ်အများစုဟာ မိဘရှိလျက်နဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မစောင့်ရှောက်နိုင်ဘဲ မိဘမဲ့ဂေဟာကို ရောက်ရှိနေရတာဖြစ်လို့ မိဘမဲ့ကလေးလို့ ခေါ်မှာထက် ရင်ခွင်မဲ့ကလေးတွေလို့ ခေါ်ရင်ပိုမှန်မယ်”လို့ ဆိုလာခဲ့တဲ့ မြင့်မိုရ်မေတ္တာ (ခိုနားရာ) ပရဟိတဂေဟာ (အများကတော့ Single Mother စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ လို့ သိကြပါတယ်) ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာသန့်နဲ့ မင်မင်တို့ For Her Myanmar ကနေ အမေးအဖြေလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကို ယောင်းတို့အတွက် ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်…
မြင့်မိုရ်မေတ္တာ(ခိုနားရာ)ကို တည်ထောင်ခဲ့တာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပရယ်လက (၂)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဆိုတော့ ဒီဂေဟာအကြောင်း ယောင်းတို့ သိရှိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မင်မင်တို့ကယူဆတာမို့ ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာသန့်ရဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရင်ခွင်မဲ့ကလေးပပျောက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…
Related Article >>> ကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်ဖို့ဆိုတာ ငွေတွေအများကြီးရှိနေမှ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ မစန္ဒီစိန်သိဏ်း
အရင်ဆုံး ဒေါက်တာ မြတ်သန့်က ဘယ်လို ရင်ခွင်မဲ့ကလေးတွေကို ကူညီပေးတာလဲဆိုတာ အရင်ကြည့်ကြရအောင်..
“အစ်မတို့ဆီမှာ လက်ခံထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို ကိုယ်ဝန်(၅)လကနေ စလက်ခံပြီး မီးဖွားပြီး (၄၅)ရက် အများဆုံး(၂)လထိ လက်ခံထားတယ်။ (၂)လမပြည့်ခင်မှာ သူတို့စီမံစရာတွေအတွက် အများကြီးတွေးတောချိန်ရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မိသားစုကိုလည်း ပြန်လည်ပူးပေါင်းခိုင်းထားတယ်။ ကလေးအတွက် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲမဆိုတာ အရင်စဉ်းစားခိုင်းတယ် ။ သူတို့မိသားစုက ဘယ်လိုမှ ဖြေရှင်းစရာ နည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုမှ ဒီကလေးကို အစ်မကယူတာ” ရယ်လို့ သူ(မ)လက်ခံ ကူညီပေးဖြစ်နေတဲ့ ကလေးတွေအကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်…
ဒီကလေးတွေကို လက်ခံထားပြီးတဲ့နောက်ရော ဘာတွေ ဆက်လုပ်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး ဆက်မေးကြည့်တဲ့အခါ…
“အစ်မဆီမှာ ထူးထူးခြားခြားလုပ်တာက မွေးစားခံခွင့်ပေးတာ။ အဲဒီတော့ မွေးစားမိဘရှာတယ်… ရှာတယ်ဆိုတာက အစ်မဆီမှာ လာတောင်းတဲ့ မွေးစားမိဘတွေ အများကြီးပဲ။ ပြီးရင် လူကယ်ပြန်( လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး)ကို အပ်တယ်။ ကလေးရော မွေးစားမယ့် မိဘကိုပါ ခေါ်ပြီး အစ်မက သွားအပ်တာ။ ဒီကလေးက မိဘမဲ့ဖြစ်သွားပြီ။ ဒီမိဘက ဒီကလေးကို လိုချင်တယ်ဆိုပြီး အဲဒီလိုသွားအပ်တာ။ ဆိုတော့ ဆက်လုပ်ရမယ့် စာရွက်စာတမ်း ကိစ္စဘာညာ အားလုံးအစိုးရနဲ့ပဲဆိုင်သွားတာပေါ့”
ယောင်းတို့တော့ မသိဘူးရယ် .. မင်မင်ကတော့ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှာ ဒီလိုရင်ခွင်မဲ့ကလေးတွေကို လက်ခံစောင့်ရှောက် ပေးတဲ့အကြောင်း ဒီလိုစကားစပ်မိမှပဲ သိခွင့်ရတော့တယ်..
Related Article >>> ရာထူးတူတဲ့ဝန်ထမ်းချင်း လစာဘာကြောင့်ကွာသွားတာလဲ (ပရော်ဖက်ရှင်နယ် HR မထူးသန့်စင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း)
ဒါဆို ကလေးမွေးစားခွင့်ကိုရော ဘယ်လိုလူတွေက ရတတ်တာလဲ?
“အစ်မက ကလေးမွေးစားခွင့်ပေးတဲ့အခါ ပစ္စလက္ခတ်လည်း မလုပ်ဘူး။ အစ်မ မျက်စိရှေ့မှာတင် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ ယုံကြည်ရတဲ့ လူကိုပဲ ပေးတယ်။ များသောအားဖြင့် အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပေါ့ ၊ တပ်ရင်းမှူးဆီ ရောက်သွားတဲ့ကလေးရှိတယ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးဆီ ရောက်သွားတဲ့ကလေးရှိတယ်၊ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆီရောက်သွားတာ ရှိတယ်၊ အမျိုးမျိုးပေါ့”
ဒီစကားကို ကြားရပြီးတဲ့နောက်မှာ ကာယကံရှင် ကလေးတွေတော့ မသိဘူး.. မင်မင်တို့က ကြားထဲက ဝမ်းသာလိုက်တာဆိုတာ .. ဆင်းရဲတဲ့မိဘ၊ သူတို့ကို မွေးမြူရမှာ အဆင်မပြေတဲ့ မိဘတွေက မွေးဖွားလာခဲ့ပေမဲ့ သူ့တို့ရဲ့ကံတရား အလှည့်အပြောင်းက ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်ပဲ ဆိုရမှာပေါ့ ယောင်းတို့ရေ…
Related Article >>> “ပိပိတို့ စကားဝိုင်း”ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စပြီး မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ မနန္ဒာပြောပြတဲ့ “ဘုန်း” နဲ့ Feminism အကြောင်း
ဒီလိုဆို ကလေးလိုချင်ပြီး ကလေးမရတဲ့သူတိုင်း မွေးစားခွင့်ရှိတာလား ဆိုတာလေးလည်း တစ်ချက်မေးကြည့်ဖြစ်တဲ့အခါ…
“နိုင်ငံတော်အနေနဲ့တော့ မွေးစားခွင့်ဥပဒေနဲ့ အုပ်ထိန်းခွင့်ဥပဒေကို ညှိနှိုင်းပြီး ပြန်ရေးပေးဖို့လိုမယ်။ အခုရေးထားတာက အရမ်းတင်းကြပ်နေတယ်။ အရမ်းတင်းကြပ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ရင်ခွင်မဲ့ကလေးတစ်ယောက်က မိဘရဖို့ ၊ မွေးစားခံခွင့်ရဖို့ မလွယ်ဘူး။ ရင်ခွင်မဲ့ကလေးဦးရေ ကျချင်ရင် ဒါတွေကိုလျှော့ပေးမှရမယ်။ သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေက အကြမ်းအားဖြင့်
ကလေးမရနိုင်ကြောင်း OG နဲ့ ဆေးကုသထားတာကို ပြနိုင်ရမယ်။
အဲ့ဒီမှာတင် မရတော့ဘူး။ အဲ့တော့ အဲဒါတွေကို ဖြေလျော့ပေးမှရမယ်။ ဟိုတလောက အစ်မဆီမှာ အသက်(၅၃)နှစ်အရွယ် အစ်မတစ်ယောက် ကလေးလာတောင်းတယ်။ တင်ပြထားတာက အိမ်(၃)လုံးပါတယ်။ စတိုးဆိုင်ပါတယ်။ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်(၅၃)နှစ်ဖြစ်နေလို့ မွေးစားခွင့်မရရှာဘူး။ စဉ်းစားကြည့်လေ.. သူက ကလေးတစ်ယောက်ကို မကျွေးနိုင်ဘူးလား… အဲဒါတွေကျတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့”
ဆိုပြီး မွေးစားခွင့်ရဖို့ တင်းကြပ်တဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေရှိနေတဲ့ အကြောင်း ပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာ မြတ်သန့်ပြောပြမှသာ ကလေးမွေးစားဖို့အတွက် ဒီလိုစည်းကမ်းချက်တွေ ထားရှိမှန်း ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိခွင့်ရခဲ့တာပေါ့ မင်မင့်အတွက် အမြတ်ပေါ့ ယောင်းတို့ရေ…
“စိတ်ချရတဲ့လူတွေ လက်ထဲပေးလိုက်ရတာ ပိုစိတ်ချမ်းသာရတယ်… ပြန်ယူသွားတဲ့ မိခင်က ဖိုးသိုးဖတ်သတ်နဲ့ဆို ပိုစိတ်ဆင်းရဲရတယ်.. ပတ်ဝန်းကျင်မလုံခြုံခဲ့လို့ မိခင်အနေနဲ့ မုဒိန်းမှုတွေ ကြုံခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုမလုံခြုံတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲ ကလေးကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုရင် ကလေးအတွက် ဘယ်လိုမှစိတ်မချဘူး။ ဒီလိုနွေးထွေးလုံခြုံတဲ့ မွေးစားမိဘတွေ လက်ထဲရောက်ပြီး သူတို့ဘဝလေးတွေ ပိုပြီးကောင်းစားသွားတာကို တွေ့ရတော့ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိတာပေါ့” ဆိုပြီး ပြောပြတဲ့ ဒေါက်တာမြတ်သန့်ရဲ့ စကားကို ကြားလိုက်ရချိန်မှာတော့ ကိုယ်ပါ ပီတိတွေ ကူးစက်လာသလိုပါပဲ။
ဒါကတော့ ဒေါက်တာ မြတ်သန့်လို့ အများခေါ်ကြတဲ့ ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာသန့်နဲ့ အက်ဒ်မင်တို့ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ စကားတွေပါ။ ဒီဆောင်းပါးလေးကနေ တစ်ဆင့် ရင်ခွင်မဲ့ကလေးတွေအကြောင်း ယောင်းတို့ ပိုသိသွားသလို ကလေးမွေးစားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေလည်း ပိုပြီး ရသွားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်…
ယောင်းတို့အနေနဲ့ သဒ္ဓါတရားထက်သန်လို့ မြင့်မိုရ်မေတ္တာပရိဟဂေဟာကို အလှူငွေထည့်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်း မြင့်မိုရ်မေတ္တာ ခိုနားရာ page မှာ ဝင်ရောက်စုံစမ်းလို့ရပါတယ်.. နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုနေတဲ့ ပရဟိတသွေးအပြည့်ပါတဲ့ အမျိူးကောင်းသား အမျိုးကောင်းသမီးတွေ အများကြီး ဒီ့ထက်မက ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း…
တငျးကွပျလှနျးတဲ့ ကနျ့သတျခကျြတှေ ရှိနတေဲ့အတှကျ ပွညျ့စုံနရေငျတောငျ ကလေးမှေးစားခှငျ့မရကွတဲ့အခါ…
ယောငျးတို့ရေ… မွနျမာနိုငျငံမှာ မိဘမဲ့ကလေးလို့ သတျမှတျထားခံရတဲ့ ရငျသှေးငယျအမြားစုဟာ မိဘရှိလကျြနဲ့ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ မစောငျ့ရှောကျနိုငျဘဲ မိဘမဲ့ဂဟောကို ရောကျရှိနရေတာဖွဈလို့ မိဘမဲ့ကလေးလို့ ချေါမှာထကျ ရငျခှငျမဲ့ကလေးတှလေို့ ချေါရငျပိုမှနျမယျလို့ ဆိုလာခဲ့တဲ့ မွငျ့မိုရျမတ်ေတာခိုနားရာ (Single Mother စောငျ့ရှောကျရေးဂဟော) ကို တညျထောငျခဲ့သူ ဒေါကျတာမွတျစန်ဒာသနျ့နဲ့ မငျမငျတို့ For Her Myanmar ကနေ အမေးအဖွလေုပျဖွဈခဲ့တာကို ယောငျးတို့အတှကျ ဝမြှေပေးခငျြပါတယျ…
မွငျ့မိုရျမတ်ေတာခိုနားရာကို တညျထောငျခဲ့တာဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ဧပရယျလက (၂)နှဈပွညျ့ခဲ့ပွီဆိုတော့ ဒီဂဟောအကွောငျး ယောငျးတို့ သိရှိပွီးသားဖွဈလိမျ့မယျလို့ မငျမငျတို့ကယူဆတာမို့ ဒေါကျတာမွတျစန်ဒာသနျ့ရဲ့ ပရဟိတ လုပျငနျးစဉျတှထေဲက တဈခုဖွဈတဲ့ ရငျခှငျမဲ့ကလေးပပြောကျရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး မေးမွနျးဖွဈခဲ့ပါတယျ…
Related Article >>> ကုမ်ပဏီတဈခုထောငျဖို့ဆိုတာ ငှတှေအေမြားကွီးရှိနမှေ ဖွဈတာမဟုတျဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ မစန်ဒီစိနျသိဏျး
အရငျဆုံး ဒေါကျတာ မွတျသနျ့က ဘယျလို ရငျခှငျမဲ့ကလေးတှကေို ကူညီပေးတာလဲဆိုတာ အရငျကွညျ့ကွရအောငျ..
“ အဈမတို့ဆီမှာ လကျခံထားတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျတှကေို ကိုယျဝနျ(၅)လကနေ စလကျခံပွီး မီးဖှားပွီး (၄၅)ရကျ အမြားဆုံး(၂)လထိ လကျခံထားတယျ။ (၂)လမပွညျ့ခငျမှာ သူတို့စီမံစရာတှအေတှကျ အမြားကွီးတှေးတောခြိနျရတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ မိသားစုကိုလညျး ပွနျလညျပူးပေါငျးခိုငျးထားတယျ။ ကလေးအတှကျ ဘယျလိုဖွရှေငျးမလဲမဆိုတာ အရငျစဉျးစားခိုငျးတယျ ။ သူတို့မိသားစုက ဘယျလိုမှ ဖွရှေငျးစရာ နညျးလမျးမရှိတော့ဘူးဆိုမှ ဒီကလေးကို အဈမကယူတာ” ရယျလို့ သူ(မ)လကျခံ ကူညီပေးဖွဈနတေဲ့ ကလေးတှအေကွောငျးကို ပွောပွခဲ့ပါတယျ…
ဒီကလေးတှကေို လကျခံထားပွီးတဲ့နောကျရော ဘာတှေ ဆကျလုပျဖွဈလဲဆိုတဲ့ အကွောငျးလေး ဆကျမေးကွညျ့တဲ့အခါ…
“ အဈမဆီမှာ ထူးထူးခွားခွားလုပျတာက မှေးစားခံခှငျ့ပေးတာ။ အဲဒီတော့ မှေးစားမိဘရှာတယျ… ရှာတယျဆိုတာက အဈမဆီမှာ လာတောငျးတဲ့ မှေးစားမိဘတှေ အမြားကွီးပဲ။ ပွီးရငျ လူကယျပွနျ( လူမှုဝနျထမျး ကယျဆယျရေးနဲ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး)ကို အပျတယျ။ ကလေးရော မှေးစားမယျ့ မိဘကိုပါ ချေါပွီး အဈမက သှားအပျတာ။ ဒီကလေးက မိဘမဲ့ဖွဈသှားပွီ။ ဒီမိဘက ဒီကလေးကို လိုခငျြတယျဆိုပွီး အဲဒီလိုသှားအပျတာ။ ဆိုတော့ ဆကျလုပျရမယျ့ စာရှကျစာတမျး ကိစ်စဘာညာ အားလုံးအစိုးရနဲ့ပဲဆိုငျသှားတာပေါ့”
ယောငျးတို့တော့ မသိဘူးရယျ .. မငျမငျကတော့ လူမှုဝနျထမျး ကယျဆယျရေးနဲ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ဝနျကွီးဌာနမှာ ဒီလိုရငျခှငျမဲ့ကလေးတှကေို လကျခံစောငျ့ရှောကျ ပေးတဲ့အကွောငျး ဒီလိုစကားစပျမိမှပဲ သိခှငျ့ရတော့တယျ..
Related Article >>> ရာထူးတူတဲ့ဝနျထမျးခငျြး လစာဘာကွောငျ့ကှာသှားတာလဲ (ပရျောဖကျရှငျနယျ HR မထူးသနျ့စငျနှငျ့တှဆေုံ့ခွငျး)
ဒါဆို ကလေးမှေးစားခှငျ့ကိုရော ဘယျလိုလူတှကေ ရတတျတာလဲ?
“ အဈမက ကလေးမှေးစားခှငျ့ပေးတဲ့အခါ ပစ်စလက်ခတျလညျး မလုပျဘူး။ အဈမ မကျြစိရှမှေ့ာတငျ တငျးတငျးကွပျကွပျ လုပျထားတာဖွဈလို့ ယုံကွညျရတဲ့ လူကိုပဲ ပေးတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ အစိုးရဝနျထမျးတှပေေါ့ ၊ တပျရငျးမှူးဆီ ရောကျသှားတဲ့ကလေးရှိတယျ၊ ညှနျကွားရေးမှူးဆီ ရောကျသှားတဲ့ကလေးရှိတယျ၊ ကုမ်ပဏီပိုငျရှငျဆီရောကျသှားတာ ရှိတယျ၊ အမြိုးမြိုးပေါ့”
ဒီစကားကို ကွားရပွီးတဲ့နောကျမှာ ကာယကံရှငျ ကလေးတှတေော့ မသိဘူး.. မငျမငျတို့က ကွားထဲက ဝမျးသာလိုကျတာဆိုတာ .. ဆငျးရဲတဲ့မိဘ၊ သူတို့ကို မှေးမွူရမှာ အဆငျမပွတေဲ့ မိဘတှကေ မှေးဖှားလာခဲ့ပမေဲ့ သူ့တို့ရဲ့ကံတရား အလှညျ့အပွောငျးက ကောငျးဖို့ဖွဈလာတယျပဲ ဆိုရမှာပေါ့ ယောငျးတို့ရေ…
Related Article >>> “ပိပိတို့ စကားဝိုငျး”ကို မွနျမာနိုငျငံမှာ စပွီး မိတျဆကျပေးခဲ့တဲ့ မနန်ဒာပွောပွတဲ့ “ဘုနျး” နဲ့ Feminism အကွောငျး
ဒီလိုဆို ကလေးလိုခငျြပွီး ကလေးမရတဲ့သူတိုငျး မှေးစားခှငျ့ရှိတာလား ဆိုတာလေးလညျး တဈခကျြမေးကွညျ့ဖွဈတဲ့အခါ…
“နိုငျငံတျောအနနေဲ့တော့ မှေးစားခှငျ့ဥပဒနေဲ့ အုပျထိနျးခှငျ့ဥပဒကေို ညှိနှိုငျးပွီး ပွနျရေးပေးဖို့လိုမယျ။ အခုရေးထားတာက အရမျးတငျးကွပျနတေယျ။ အရမျးတငျးကွပျတဲ့ အတှကျကွောငျ့ ရငျခှငျမဲ့ကလေးတဈယောကျက မိဘရဖို့ ၊ မှေးစားခံခှငျ့ရဖို့ မလှယျဘူး။ ရငျခှငျမဲ့ကလေးဦးရေ ကခြငျြရငျ ဒါတှကေိုလြှော့ပေးမှရမယျ။ သူတို့ခမြှတျထားတဲ့ စညျးကမျးတှကေ အကွမျးအားဖွငျ့
ကလေးမရနိုငျကွောငျး OG နဲ့ ဆေးကုသထားတာကို ပွနိုငျရမယျ။
အဲ့ဒီမှာတငျ မရတော့ဘူး။ အဲ့တော့ အဲဒါတှကေို ဖွလြေော့ပေးမှရမယျ။ ဟိုတလောက အဈမဆီမှာ အသကျ(၅၃)နှဈအရှယျ အဈမတဈယောကျ ကလေးလာတောငျးတယျ။ တငျပွထားတာက အိမျ(၃)လုံးပါတယျ။ စတိုးဆိုငျပါတယျ။ ကနျထရိုကျလုပျငနျးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အသကျ(၅၃)နှဈဖွဈနလေို့ မှေးစားခှငျ့မရရှာဘူး။ စဉျးစားကွညျ့လေ.. သူက ကလေးတဈယောကျကို မကြှေးနိုငျဘူးလား… အဲဒါတှကေတြော့ မဖွဈသငျ့ဘူးပေါ့”
ဆိုပွီး မှေးစားခှငျ့ရဖို့ တငျးကွပျတဲ့ စညျးကမျးခကျြတှရှေိနတေဲ့ အကွောငျး ပွောပွပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒေါကျတာ မွတျသနျ့ပွောပွမှသာ ကလေးမှေးစားဖို့အတှကျ ဒီလိုစညျးကမျးခကျြတှေ ထားရှိမှနျး ဗဟုသုတအနနေဲ့ သိခှငျ့ရခဲ့တာပေါ့ မငျမငျ့အတှကျ အမွတျပေါ့ ယောငျးတို့ရေ…
“စိတျခရြတဲ့လူတှေ လကျထဲပေးလိုကျရတာ ပိုစိတျခမျြးသာရတယျ… ပွနျယူသှားတဲ့ မိခငျက ဖိုးသိုးဖတျသတျနဲ့ဆို ပိုစိတျဆငျးရဲရတယျ.. ပတျဝနျးကငျြမလုံခွုံခဲ့လို့ မိခငျအနနေဲ့ မုဒိနျးမှုတှေ ကွုံခဲ့ရတယျ။ ဒီလိုမလုံခွုံတဲ့ ပတျဝနျးကငျြကိုပဲ ကလေးကိုပွနျထညျ့ပေးလိုကျရမယျဆိုရငျ ကလေးအတှကျ ဘယျလိုမှစိတျမခဘြူး။ ဒီလိုနှေးထှေးလုံခွုံတဲ့ မှေးစားမိဘတှေ လကျထဲရောကျပွီး သူတို့ဘဝလေးတှေ ပိုပွီးကောငျးစားသှားတာကို တှရေ့တော့ ဝမျးသာပီတိဖွဈမိတာပေါ့” ဆိုပွီး ပွောပွတဲ့ ဒေါကျတာမွတျသနျ့ရဲ့ စကားကို ကွားလိုကျရခြိနျမှာတော့ ကိုယျပါ ပီတိတှေ ကူးစကျလာသလိုပါပဲ။
ဒါကတော့ ဒေါကျတာ မွတျသနျ့လို့ အမြားချေါကွတဲ့ ဒေါကျတာမွတျစန်ဒာသနျ့နဲ့ အကျဒျမငျတို့ ပွောဖွဈခဲ့ကွတဲ့ စကားတှပေါ။ ဒီဆောငျးပါးလေးကနေ တဈဆငျ့ ရငျခှငျမဲ့ကလေးတှအေကွောငျး ယောငျးတို့ ပိုသိသှားသလို ကလေးမှေးစားခွငျးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဗဟုသုတတှလေညျး ပိုပွီး ရသှားနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ…
ယောငျးတို့အနနေဲ့ သဒ်ဓါတရားထကျသနျလို့ မွငျ့မိုရျမတ်ေတာပရိဟဂဟောကို အလှူငှထေညျ့သှငျးခငျြတယျဆိုရငျလညျး မွငျ့မိုရျမတ်ေတာ ခိုနားရာ page မှာ ဝငျရောကျစုံစမျးလို့ရပါတယျ.. နိုငျငံကိုအကြိုးပွုနတေဲ့ ပရဟိတသှေးအပွညျ့ပါတဲ့ အမြိူးကောငျးသား အမြိုးကောငျးသမီးတှေ အမြားကွီး ဒီ့ထကျမက ပျေါထှကျလာနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးရငျး…
Tags: babies, dr myat thant, Interview, law, officer, Single Mom